Räven & Osten | Shanyira Hultsfred
Papurazi Lida kunze kweJärnforsen, chizi inogadzirwa nehunyanzvi uye diki nzira. Mukaka uyu unobva kumurimi wemuno. Pedyo nemukaka chitoro chepurazi chine cheki counter uye zvigadzirwa kubva kune vagadziri vemuno.
Muchitoro chepurazi unogona kutenga zvinhu kubva kune vagadziri vemuno uye zvirokwazvo unogona kutenga cheki yepurazi yega. Iyo café inopa sandwiches, kofi chingwa, organic kofi uye zvimwe.
Munguva yezhizha, cafe yakavhurwa muchivanze, kubva 1 Chikunguru kusvika pakati paAugust, China-Muvhuro kubva 11am kusvika 16 pm. Ikozve kune kahawa ine kofi uye masikati emwenje, shopu repurazi rine zvinhu kubva kune vagadziri vemuno uye kaunda keke nemazizi ese epurazi.
4.5 kubva pa5.0
97 wongororo paGoogle